နှင်းဆီပန်းကလေး – Grab Love Story
သစ်သားပြားလေးရဲ့ချိုင့်နေတဲ့ အပိုင်းလေးတွေပေါ်မှါ ကျော့ရှင်းတဲ့ လည်တိုင်လေးရယ် လက်ကောက်ဝတ် နုနုလေးရယ်ကို တင်လိုက်သည်။ ဒေါက်ကနဲ ထိပ်တုံရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို ပိတ်ချလိုက်သံနှင့် အတူ ဂလောက်ခနဲ သော့ခတ်သံကို ပါ ကြားလိုက်ရသည်။ မလွတ်မြောက်အောင် ချုပ်နှောင်ခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့ အသိက ကျွန်မကို ရင်တစ်လှပ်လှပ်ခုန်စေသည်။ ဟား ဟား ဟားဟား ဟု အော်ရယ်သော အသံနက်ကြီးကို အနောက်ဘက်နေ ကျက်သီးထဖွယ်ရာ ကြားရသည်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် သူဌေးမကြီး ဒေါ်နှင်းဆီမှဟုတ်ရဲ့လားလို့တွေးယူရတယ်။ ခင်းဗျားဒါကို တစ်ကယ်ကြိုက်နေပြီပဲ ခင်ဗျားကို ခင်ဗျားဘယ်အနေအထားဖြစ်နေမလဲကော တွေးမိရဲ့လား ကျွန်မတွေးမိတာပေါ့ ကျွန်မရဲ့ တင်းရင်းတဲ့ တင်ပါးတွေကို ကုန်းထားရပြီး ဆူဖြိုးတဲ့ရင်သေးတွေနဲ့ ခါးကို ကိုင်းညွှန့်ထားတဲ့ အနေအထားဟာ သိပ်ရှက်စရာကောင်းမှန်းတွေမိတာပေါ့ ကွယ်လွန်သူ အရာရှိတစ်ဦးရဲ့ ဇနီမယား ယခု လက်ရှိ မြို့ရဲ့ အချမ်းသာဆုံးတွေထဲက တစ်ဦးမို့သာ ကျွန်မကို ဒေါ်တပ်ခေါ်ကြတာ ။ အသက်က ၂၇နှစ်သာရှိသေးသည်။ သားသမီးမဖွားဖူးသူ မိန်းမတစ်ယောက်…….။ ဖြေပါဦး ဒေါ်နှင်းဆီရဲ့ မင်းသိပ်ကြိုက်နေပြီမှတ်လား….။ ဟုတ်ကဲပါရှင် ကျွန်မ အရမ်းကြိုက်နေပါပြီ အို …မင်းက ယုတ်ညံတဲ့ ကျွန်စိတ်ရှိတဲ့ မိန်းမဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိပြီပေါ့ ပြေရင်းနဲ့ ကျွန်မအနီးထိုင်ကာ ရင်ဖုံးအင်္ကျီအောက်က ဖောင်းအိတဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံလေးကို စုပ်နယ်လိုက်သည်ဖ။ အ…ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မပို ကျွန်မသိပါပြီ…..။ ကောင်းတယ် အခု ငါမင်းရဲ့တင်ပါးကို ရိုက်မယ် မင်းငြ်းမလား မငြင်းပါဘူးရှင်……။ သူက ကျွန်မရဲ့ တင်ပါးနုနုလေးတွေကို ပွတ်သပ်နေရင်း ငါမင်းကို ဘယ်လိုရိုက်ပေးရမလဲနှင်းဆီ….။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး သာရိုက်ပေးပါရှင် ဒါမျိုးလား ရွှမ်း အား………… ကျွန်မရဲ့ အော်ဟစ်သံက သူ့နားထဲမှာ ဂီတသံဖြစ်လေသလားမသိပါ။ ကျွန်မကတော့ တင်ပါးပေါ် တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက် ကျလာတဲ့ ရိုက်ချက်တွေရဲ့ နာကျင်ခြင်းကြောင့် ကန်ရေပြင်လို့ လှုပ်ရှားနေသောစိတ်တွေ ပြေလျော့ရသည်။ ခြေထောက်တွေ တဆက်ဆက်တုန်နေပြီး ကြမ်းပြင်မှာ မနဲထောက်ထားရသည်။ သူက ကျွန်မထဘီကို လှန်တင်လိုက်ရာ အရည်ကလေး စိုစိစိုစိဖြစ်နေသော ကျွန်မရဲ့ အဖုတ်လေးကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်၏။ သိပ်မကြာခင်မှာ ကြီးမားသော လိက်အင်္ဂါနစ်ခု ထိုးသွင်းခံလိုက်ရကြောင်းခံစားရသည်။ ဒါတင်မက တင်းအိသော ရင်သားအစုံကို အင်္ကျီပေါ်မှပင် စုပ်နယ်လေရာ ဖရို ဖရဲဖြစ်ကုန်သည်။ သူ့စန္ဒပြည့်ချိန်မှာ ကျွန်မခေါင်းငိုက်စိုက်ကျနေပြီ။ အခန်းထဲ ဝင်လာသော ခြေသံကို ကြားရသည်။ နှင်းဆီ မော့ကြည့်စမ်း ငါနင့်ကို နင့် သခင်မအသစ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့……..။ ကျွန်မ အားယူက ခေါင်းကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ဟင် မေဘယ် ……..ုကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တွင်းနက်နက်ထဲ ပစ်ကျသွားသလိုခံစားရသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သူရဲ့ရှေ့မှာ အရှက်မဲ့သော အနေအထားနှင့် ရှိနေသည်မဟုတ်လား။ ဒီနေ့ကစပြီး မင်းက သူ့ရဲ့ ကျေးကျွန်ဖြစ်သွားပြီ နေ့ရက်တိုင်းအချိန်တိုင်းအတွက်ပေါ့ နှင်းဆီ…..။ ဟင့်အင်း ကျွန်မမလုပ်နိုင်ဘူး…… မင်းလုပ်မှာပါ မင်းလိုချင်တာတွေရဖို့ ဒီတစ်နည်းပဲရှိတာ…..ဟင်းဟင်း မေဘယ်ရဲ့စကားက သိပ်ကို ပိုင်နိုင်နေသည်။ ကျွန်မမငြင်းနိုင်ပါ ။ နှိမ်ချဆက်ဆံခံရခြင်းမှာ ကျွန်မပျော်ဝင်နေသည်လေ။
မနက်နိုးလာတော့ ကျွန်မရဲ့ အိမ်ဟာ ခြောက်ကပ်နေသည်။ အရင်က အိမ်စေ ကောင်မလေးတွေကို ဘဝအမှောင်စကျတဲ့ ရက်တွေမှာပင် အိမ်ပြန်လွှတ်ခဲ့သည်။ အများအမြင်တွင်တော့ ဒီအိမ်မှာ သူငှေးမကြီး ဒေါ်နှင်းဆီ တစ်ကိုယ်တည်းအေးချမ်းစွာနေထိုင်သည်ပေါ့ ။ အမှန်တစ်ကယ်တွင်တော့ ကျွန်မဘဝက အမှောင်တွေဖုံးနေခဲ့သည်။ ကလင်……..ကလင်….. လူခေါ်ဘလ်သံကြောင့် ကျွန်မ ငိုင်နေရာမှထကာ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ မေဘယ့်ကို တွေ့ရသည်။ မရယ်မပြုံးနဲ့ ဝူ့မျက်နှာမှာ မာန်တစ်ခု ပါဝင်နေသည်ဟု ထင်မိသည်။ သူမရဲ့ အရှိန်အဝါကို ရင်မဆိုင်ရဲသလိုခံစားရသဖြင့် ခေါင်းငုံ့ထားမိသည်။ သူမက ဘာကိုမှဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ အိမ်ထဲလှမ်းဝင်လာသည်။ ကျွန်မ အိမ်တံခါးကို ပြန်ပိတ်ပြီး သူမရှေ့မတိတပ်ရပ်မိတော့ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်ကာ သွား ငါ့အတွက် ကော်ဖီတစ်ခွက်သွားဖျော် ပြီးရင်ရေချိုးပြီး ရင်လျှားရက်နဲ့ ငါ့ဆီလာခဲ့…….။ ကျွန်မအိမ်ပေါ်တတ်ကာ ကျွန်မကို သူ့ရဲ့ အစေခံတစ်ယောက်လို အမိန့်ပေးနေပေမဲ့ ကျွန်မမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်မ ယောက်ျားတစ်ယောက်လက်အောက်မှာ အရှက်မဲ့စွား ပြုမူခံနေတဲ့ မြင်းကွင်း သူမြင်သွားတဲ့နေကတည်းက သုမရှေ့မှာ အလိုလို သိမ်ငယ်နေမိသည်။ မီးဖိုခန်းထဲဝင်ကာ ကောဖီတစ်ခွက်ကို ဖျော်ပြီး သူမရှေ့ချပေးတော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ ကျွန်မလည်း သူမပြောထားတဲ့အတိုင်း ရေသွားချိုးကာ ရင်လျှားရက်နှင့် သူမရှိရာသွားရသည်။ ကျွန်မရောက်နေမှန်းသိပေမဲ့ မေဘယ်က မော့ကြည့်မလာ……။ ငါ…ငါ ရောက်နေပြီမေဘယ် သူမ စာဖတ်နေရာမှမော့ကြည့်သည်။ ပြီးတော့ သုမယူလာတဲ့ အထုတ်ကို ပစ်ပေးသည်။ ကျွန်မ လှမ်းဖမ်းပြီးဖွင့် ကြည့်တော့ အထဲက အဝတ်တစ်စုံ……။ အဲ့တာတွေ…ဝတ်လိုက် ။ အိတ်ထဲက ဟာတွေပဲနော် နှင်းဆီ….နင် အတွင်းခံတွေ ဝတ်ဆရာမလိုဘူး ရှင်……။ ကျွန်မရဲ့ အာမေဋိတ်သံကို သူမက မသိယောင်ပြုကာ စာပြန်ဖတ်နေသည်။ မတတ်နိုင်။ ကျွန်သူပေးတဲ့လအဝတ်အစားတွေကို အတွင်းခံ လုံးဝမပါပဧဝတ်ရသည်။ အပေါ်က ပိုးပျော့သားဖြင့် ချုပ်ထားသော ရင်ဖုံးလက်ရှည်လေးနဲ့ အောက်ကလည်း ပိုးပျော့ထဘီ ….။ အစိမ်းနုရောင်လေး ထက်အောက်ဝမ်းဆက်။ ကျွန်မကိုယ်လေးနဲ့ ကွက်တိမို့ တင်းတင်းရင်းရင်းရှိလှသည်။ သူမက ဒီနားလာထိုင်ဟုဆိုပီး ခုံဘေးကို လက်နဲ့ ပုတ်ပြသည်။ ထိုင်လိုက်တော့ မေဘယ့်ကို ကျောပေးစေကာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပေးသည်။ ပြီူတော့မျက်နှချင်ူဆိုင် ပြန်လှည့်စေကာ မျက်နှာလေးကို အလှပြင်ပေးပြန်သည်။ ငါ့ကို တစ်ပါတ်လှည့်ပြစမ်း နှင်းဆီ သူမအမိန့်အတိုင်း သူမရှေ့တွင် ကိုယ်ကို လှည့်ပြတော့ သူမကသူမလက်ယာကို သဘောကျနေသည်။ မင်းသိပ်လှတယ်နှင်းဆီ ဒါကြောင့်လဲငါ အမြဲမနာလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့…….။ ပြောပြီ ကျစ်ဆံမြီးလေးကို ပုခုံးပေါ်မှာ ယူကာ ရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပးသည်။ သွားစို့ အလှူနောက်ကျနေဦးမယ်။
မေဘယ်မောင်းလာသော ကားက ခန်းနားသော ခြံကြီးအတွင်းရပ်တန့်သွားသည်။ ဆင်းရအောင် နှင်းဆီ…..။ သြဒါနဲ့ ဆင်းဖို့ခြေလှမ်းပြင်နေတဲ့ ကျွန်မမေဘယ်စကားကြောင့်လှည့်ကြဘ့်တော့ မေဘယ်က ကျွန်မကို ခပ်မဲ့မဲ့လေးပြုံးပြကာ…….နင်သိလားနှင်းဆီ …… ပြည့်တန်ဆာတွေတောင် အတွင်းခံမပါဘဲ အပြင်ထွက်လေ့မရှိဘူး….။ ကျွန်မကျက်သေသေသွားမိသည်။ အဲ့အချိန်မှာပဲ အလှူ့ရှင် လင်မယားက ကားနားလာ တံခါးဖွင့်ပြီးကြိုဆိုသည်မို့ အပြင်ထွက်ရသည်။ အလှူမှကျွေးသော အစားအသောက်တို့ကို စိတ်မဝင်စား ။ အဝတ်နှင့်အတိုင်းသားဖြစ်နေသော အရှက်တရားတို့ကို ဘယ်သူ မြင်သွားမလဲတွေကာ စိတ်ခြောက်ခြားနေမိသည်။ မေဘယ်ကတော့ ကျွန်မဖြစ်ပျက်နေသမျှကို အရသာခံကာကြည့်နေသည်။ နည်းနည်းလှုပ်လိုက်တာနဲ့ တင်းအိနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ လှုပ်ယိမ်းမသွားအောင် ထိန်း၍ နေထိုက်လှုပ်ရှား အပြီးမှာ ရှက်ရွံ့မှုကြောင့်မျက်ရည်ဝဲနေတဲ့ ကျွန်မကို ကားပေါ်တင်ပြီး ကျွန်မရဲ့ အိမ်ရှိရာကို အတူ ပြန်ခဲ့ကြသည်။ မေဘယ့်ရဲ့ ခနဲ့ ပြုံးတွေကို ရင်မဆိုင်ရဲတာကြောင့် ကားပေါ်ကနေ အပြက်ကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ အိမ်ရှေ့ရောက်သဖြင့် ကားထဲမှဆင်းကာ ခြံတံခါးဖွင့်ပေးရသည်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ သူက ဆက်တီမှာဝင်ထိုင်သည်။ ကျွန်မလည်း နွမ်းနယ်နေသည်မို့ သူမရှေ့ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ သူက ကျွန်မကို ပြုံးစေ့စေ့ကြည့်ကာ ဘယ်လိုလဲ နင့်အနေအထားနင် သဘောကျရဲ့လား နှင်းဆီ ငါ…….. ငါ…….. လိမ်မယ်မကျန်နဲ့ နှင်းဆီ ငါ့ မျက်လုံးကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီးဖြေစမ်း ရှက်နေပေမဲ့ နင့်သဘောကျနေတယ်မှတ်လား ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မ သဘောကျပါတယ်။ ဟား…..ဟား….ဟား…ဟား…. မေဘယ့်ရဲ့ လှောင်ရယ်သံဟာ ကျွန်မနားထဲမှာ မိုးခြိမ်းသံလိုပဲ။ ကျွန်မ ပိုင်ဆိုင်သမျှကို အားလုံး ယူဆောင်သွားခြင်းခံရသလိုပဲ။ ကျွန်မကို သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ဖို့စေ ခိုင်းနေသလိုပဲ ခံစားရသည်။ မင်းကတော်တော် ယုတ်ညံတဲ့မိန်းမပဲ နှင်းဆီ…..။ ကောင်းပြီ ဒီနေ့ကစပြီး မင်းကို ငါ့ရဲကျေးကျွန်အဖြစ်ငတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဒီနေ့ကစပြီး မင်းရဲ့ အသက် အရှက်နဲ့ ငိက္ခာတရားအားလုံးကို ငါပိုင်တယ် ကြားလား…..။ အပါတ်တိုင်း စနေ တနင်္ဂနွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့ရက်တွေအားလုံး နင်ငါ့အတွက် အသက်ရှင်ရမယ် ကြားလား နှင်းဆီ….။ ဟုတ် ကြား…..ကြားပါတယ် သွားစို့ နင့်ကို ထိန်းကျောင်းဖို့ ငါအိမ်တလုံးပြင်ထားတယ်။
မေဘယ်မောင်းလာတဲ့ကားလေးက မြို့စွန်က ခြံကြီးထဲမှာရပ်တန့်သွားသည်။ ခြံကျယ်ကြီးထဲမှာ သစ်ပင်တွေကို သစ်တောငယ်လေးအလား ငြို့နေအောင်စိုက်ထားပြီး အတော်အသင့်ကြီးမားသော အိမ်တစ်လုံးရှိတယ်။ နှင်းဆီ….. ရှင်…… မေဘယ်ဘယ်ခေါ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မမရည်ရွယ်ပဲ ရိုရိုသေသေလေးထူးမိသွားသည်။ သူမက ဟက်ကနဲရယ်ကာ ကားပေါ်က ဆင်းပြီးလေးဘက်ထောက်ထားနှင်းဆီ..။ ကျွန်မ သူ့အမိန့်ကို နာခံလိုက်သည်။ မြို့စွန်ကျသည်မို့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ရှင်း၍သာတော်တော့သည်။ သူမက ကားပေါ်က ဆင်းကာ လာလိုက်ခဲ့ဟုခေါ်ပြီး အိမ်ရှိရာသို့ထွက်သွားတော့ ကျွန်မနောက်က လေးဘက်ထောက်၍လိုက်ရသည်။ ကျွီခနဲ တံခါးဖွင့်သံဟာ ကြောက်လန့်ဆရာပါပဲ ။ သူမက ကျွန်မကို အိမ်အနောက်ဘက်က အခန်းတစ်ခန်းကို ဦးဆောင် ခေါ်သွားသည်။ အခန်းက ပေနှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းကိရိယာတွေ အစုံရှိပါတယ်။ နှင်းဆီ ဟို ခုံပေါ်ကို ကြည့်လိုက်စမ်း ….. သူမညွှန်ပြတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ သားရေ ပစ္စည်းတစ်ချို့ရှိနေပါတယ် အဲ့တာ နင်အတွက် အဆင်တန်ဆာတွေပေါ့ သွားယူပြီး ငါ့ဆီယူလာခဲ့ ပါးစပ်နဲ့နော် သူကပြောပြီး အခန်းထဲက ခုံတစ်ခုံမှာသွားထိုင်သည်။ ကျွန်မကတော့ လေးဘက်ထောက်က ခွေးမလေးလို သွား၍ ခုံပေါ်က ပစ္စည်းတွေကို ပါးစပ်နှင့်ကိုက်ကာ သူ့ခြေရင်းကို ချပေးရသည်။ အားလုံးယူပြီးတော့ မတ်တပ်ထပြီး မင်းအတွတ်တွေ အကုန်ချွတ်လိုက်နှင်းဆီ . ကျွန်မ ကိုယ်ပေါ်က ရင်ဖုံးလက်ရှည်လေးရယ် ထဘီလေးရယ်ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ ကျွန်မ ခန္ဓာကိယ်က မိမွေးတိုင်းကျန်ခဲ့သည်။ မေဘယ်က လည်ပါတ်လေးကို ကောက်ယုလိုက်ကာ ကျွန်မရဲ့ လည်တိုင်ကျော့ကျော့ကို ပါတ်ပေးလိုက်သည်။ နှင်းဆီ မင်းအခုကစပြီး ငါ့ရဲ့ခွေးမလေးဖြစ်သွားပြီ….။ မေဘယ်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ ကျွန်မဟာ သူမကို နည်းနည်းမှ မတွန်းလှန်ရဲလောက်အောင် စိတ်ခွန်အားတွေကုန်ဆုံးနေပါပြီ။ ငါ့ကို နင် ခုချိန်ကစပြီး သခင်မလို့ ခေါ်ရမယ် ကြားလား……။ ဟုတ်ကြားပါတယ် သခင်မလေး အားတင်းပြီးပြောလိုက်တဲ့ အဖြေစကားကို သူမ နှစ်ခြိုက်သွားပုံရသည်။ သူက ကျွန်မလက်ကောက်ဝတ်တွေနဲ့ ခြေကျင်းဝတ်တွေကို သရေပြားလေးတွေပါတ်ပေးသည်။ အဲ့သရေပြားလေးတွေမှာ သံကွင်းလေးတွေပါသဖြင့် အလယ်က သံကြိုးလေးများဖြင့် ဆက်လက်သည်နှင့် ကျွန်မကို လက်ထိပ်ခတ်ပြီးသွားဖြစ်သွားနိုင်သည်လေ။ ပြီးတော့သူက ကျွန်မကို ငါ့လိုက်လိုက်ခဲ့ ဟုခေါ်သွားကာ ခြောက်ပေ လေးပေ လောက်ရှိသော လှောင်အိမ်လေးထဲသို့ ထည့်ပြီး အပြင်က သော့ခတ်ကာ ထွက်သွားသည်။ ကျွန်မလည်း ခွေးလေးတစ်ကောင်လို ကွေးကွေးလေး အိပ်စက်နေမိသည်။
ကြည့်စမ်းပါဦး လှောင်အိမ်ထဲ အိပ်နေတာ ဘယ်ကခွေးမလေးလဲလို့…… အငံကြောင့် ကျွန်မနိုးသွားပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မေဘယ်တို့အိမ်ကအိမ်ဖော် မျိုးမျိုးကိုတွေ့ရသည်မို့ မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ မျိုးမျိုးက ကျွန်မကို အပြင်ထွက်လာလို့ခေါ်ပြီး လည်ပါတ်မှာ ကြိုးလေးတပ်ကာ ခွေးလေးတစ်ကောင်လို ဆွဲခေါ်သွားသည်။ မျိုးမျိုးနောက်က လေးဘက်ထောက်လိုက်နေရင် မျက်ရည်ကျရသည်။ မျိုးမျိုးက ကျွန်မကို ရေချိုးခန်းထဲခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီး အထဲရောက်တော့ လက်ထိပ်နှစ်ခုကို သံကြိုးနဲ့ဆက်က ခေါင်မိုးမှ ချထားသော သံကြိုးနဲ့ ချိတ်ပေးလိုက်သည်။ ကျွန်မှာ ခြေထောက်တွေဟာ ကျမ်းပြင်မှာ ခြေဖျားထောက်ရက်သား။ ဆူဖြိုးသော ရင်သားနဲ့ တင်ပါးတွေဟာ အဖုံးအကာမရှိ ထွက်ပေါ်နေသည်။ မျိုးမျိုးက ရေပိုက်ငယ်လေးနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကို ပါတ်ဖျန်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဆပ်ပြာတုံးလေးဖြင့် ခန္ဓာကိုယ့်အနှံ့ကို ပွတ်ပေးတိုက်ပေးသည်။ ပြီးတော့ ရေပိုက်လေးနဲ့ ထပ်ဖြန်းကာ ခြောက်သွေ့သွားအောင်အဝတ်နဲ့ သုတ်ပေးပြီးမှ လက်ထိပ်ကို ဖြုတ်ပေးသည်။ ပြီးတော့ အပေါ်ထပ်ကာ အခန်းတစ်ခန်းထဲခေါ်သွားသည်။ အိပ်ခန်းထဲ ခုတင်ပေါ်မှာ မေဘယ်က ဟာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေသည်။ ကျွန်မတို့ဝင်သွားတော့ မော့ကြည့်ကာ ရပြီမျိုးမျိုး ထားခဲ့လိုက်တော့ဟုဆိုပြီး စာပြန်ဖတ်နေသည်။ ကျွန်မကတော့ခုတင်ခြေရင်းမှာ လေးဘက်ထောက်လို့။ ခဏနေတော့ သူက. စာပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်လေးကိုယူကာ ငါ့ရဲ့ခွေးမလေး နှင်းဆီ ရော့စားစမ်းဟုဆိုပြီး မလှမ်းမကမ်းကို ပစ်ချပေးသည်။ ကျွန်မလည်း ဆာနေသည်မို့ သူပစ်ချလိုက်သောနေရာထိ လေးဘက်ထောက်သွားကာ ခွေးလေးလို စားသောက်ရသည်။ စားပြီးရင် ဒီနားလာခဲ့…….. သူမအမိန့်အတိုင်း သူမအနားသွားပြီး အနားရောက်တော့သူမက လည်ပါတ်ကြိုးမှ ဆွဲယူက ကျွန်မရဲ့မေးစေ့အောက်ကလေးကို ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်လို ပွတ်သပ်ပေးသည်။ အပေါ်တပ်ထိုင်လိုက်…..ဟုအမိန့်ပေးပြီး ကျွန်မရဲ့ လက်ထိပ်တွေကို သံကြိုးနဲ့လက်ပြန်ဆက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အနောက်ကနေသိုင်းဖက်ကာ ရင်သားတွေကို စုပ်နယ်နေသည်။ အဟင့် ဟင့် ကျွန်မရဲ့ ညည်းသံသဲ့ကြောင့် သူမက ဟက်ကနဲရယ်သည်။ ပြီးလက်တစ်ဖက်က အောက်ငို့ဆင်းသွာကာ လက်ခလယ်တစ်ချောင်းကို အဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်သည်။ လက်ခလယ်ကို ထိုးမွှေနေရင်းတစ်ဆက်ထဲမှာပင် နို့သီးခေါင်းလေးကို ဖိညစ်လိုက်သည်။ မထင်ထားသော နာကျင်မှုကြောင့် ကျွန်မအော်ဟစ်လိုက်မိသည်။ သူမကတော့ ကျွန်မကို မျိုးစုံကလိနေစဲ နောက်တော့ သူမက ခုတင်မှာမှီထိုင်ပြီး ထဘီကို လျောချလိုက်ကာ သူအဖုတ်ကို လျှာနဲ့လျက်စေသည်။ သူ့စန္ဒပြည့်ဝတဲ့အခါမှ ခုတင်ပေါ်က တွန်းချကာ ကြမ်းပြင်မှာ ခွေးလေးလိုအိပ်ရသည်။
နောက်ပိုင်းနေ့ရက်တွေမှာ နှင်းဆီဆိုတဲ့မိန်းမငယ်လေးဟာ မေဘယ်ဆီမှာ ကျေးကျွန်သဖွယ်နေထိုင်ရရှာသည်။ စနေ တနင်္ဂနွေနှစ်ရက်ကိုတော့ ပုံသေ ကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီး အိမ်ပြန်အနားယူနိုင်သည်။ ကျန်ငါးရက်တော့ ခိုင်းသမျှ ခေါင်းငုံ့လုပ်ပေတော့ပဲ။ ပေနှစ်ဆယ် ပါတ်လည်လောက်ရှိတဲ့အခန်းထဲမှာ ခွေးလှောင်အိမ်လေးထဲမှာ ကျွန်မရှိသည်။ အပြင်းဆန့်ချင်ရင်တောင် မဆန့်နိုင်အောင် လှောင်အိမ်လေးက သေးငယ်လှသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပင် မေဘယ်က ဝင်လာသည်။ ဒေါက်ကနဲကျရာ အမဲရိုးအတုလေးဆီကို သွားပြီး ပါးစပ်ဖြင့်ကိုက်ယူကာ မေဘယ်ရှိဏာသို့ ပြန်သွားပေးရသည်။ မေဘယ်က ကျွန်မဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ပြီး တော်လိုက်တဲ့ခွေးမလေးလို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့ အမဲရိုးကို ပါးစပ်နားတေ့ပေးသည်။ ကျွန်မက လှမ်းကိုက်တော့ သူမက အနောက်ကိုဆွဲယူသွားသည်။ ဆိုတော့ ကျွန်မပုံစံက အမဲရိုးကို အငမ်းမရလိုချင်နေသည့်ခွေးမလေးပုံပေါက်နေသည်။ မေဘယ်က ကျွန်မရဲ့ ပါးစပ်ထဲ အမဲရိုးကို ထည့်ပေးကာ ပြုတ်မကျစေနဲ့ ဟု အမိန့်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆက်တီပေါ်ဆွဲတင်ကာ လက်နှစ်ကို ကို လက်ပြန်ဆွဲလိမ်ပြီး လက်ထိတ်နှစ်ခုကို ချိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့သူ့ရင်ခွင်ထဲမှီလှဲလေးလှဲစေကာ အဝတ်မဲ့သော ကျွန်မကိုယ်ကို စိတ်ကြိုက်ပွတ်သပ်နေသည်။ ကာမစိတ်တွေ နိုးကြွလညပေမဲ့ မညည်းညူမိအောင် ကြိုးစားနေရသည်။ ထောင်ထလာသော နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလစ်နဲ့ ညပ်လိုက်သည်ကလည်း အလွန်နာကျင်စေငည်။ကျွန်မအဖုတ်ထဲ ထိုးထဲပြီး ကလိနေသည်ကိုလည်း အမဲရိုးကို တင်းတင်းကိုက်ရင်းခံစားနေရသည်။ အတော်ကြာတော့မှာ တော်တယ်ဟု သူမကို ဆိုပြီး ကျွန်မကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်းချလိုက်သည်။ ပတ်လက်ကလေစဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မမျက်နှာပေါ်ဂါဝန်လေးမတင်ပြီးထိုင်ချသည်။ ကျွန်မလည်း သူမကို လျှာကလေးဖြင့်ပြုစုရသည်။ တော်တော်ကြာအောင် ခံစားပြီးမှ သူမထသွားသည်။ မကြာခင်မှာပဲ ရင်အုံနုနုလေးမှ အပူကို ခံစားရသည်။ ဖုယောင်းစက်ချနေခြင်းပင် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ခံစားရသည်မို့တွန့်လိမ်နေသည်။ သူမစိတ်တိုင်းကျချပြီးတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲနေတဲ့ ကျွန်မကို ကြာပွတ်နဲ့ ဖုယောင်းစက်အကုန်ကွာကျသည်အထိ လွှဲရိုက်သည်။ ရိုက်ချက်တွေနာကျင်နေသည်ကို ရင်းစီးခံရုံမတပါးအခြားမရှိခဲ့ပါ။ နှစ်နှစ်ခန့်အကြာ……။ မင်္ဂလာခန်မထဲက လမ်းလေးအတိုင်း ချစ်ရသူရဲ့ လက်ကိုစွဲက ကျွန်မလမ်းလျှောက်လာသည်။ ခြေလှမ်းတွေက အနည်းငယ်တုန်ယင်နေသညကို ဟန်မပျက်အောင်ထိန်းလျှောက်နေရသည်။ သတို့သမီးဂါဝန်အောက်မှာ အတွင်းခံအစား ကြိုးတစ်ချောင်းက အဖုတ်ကြားနစ်ဝင်နေသည်။ကျွန်မမျက်နှာနီမြန်းနေသညကို မောင်ကတော့ သာမာန်ရှက်နေခြင်းလို့သာထင်လိမ့်မည်။ အရံခုံမှာ မေဘယ်က လှောင်ပြုံးလေးပြုံးပြနေသည်မို့ခေါင်းငုံ့မိသည်။ ကျွန်မဘဝကို သူမချယ်လှယ်နေစဲပင်…..။ ပြီး၏